MILAN-JUVE: Taageerayaasha oo sawirro maad leh ka sameeyay! + Sawirro – Gool FM
MILAN-JUVE: Taageerayaasha oo sawirro maad leh ka sameeyay! + Sawirro
Raage October 23, 2016
(Milano) 23 Okt 2016 – Waxaa xalay garoonka San Siro ka dhacay kulan uu caalamku si wayn u eegayay oo dhex maray kooxaha AC Milan vs Juventus oo markii ugu horreeysey muddo 4 sano ah dheelayay kulan loogu tartamayay taxa sare ee horyaalka Talyaaniga.
Waxaana cajiib ah in sidii dhacday markii ugu dambaysey ee ay kooxahani sidaa yeelaan oo ahayd 25-kii Nofeembar 2012 oo uu ciyaarta ka dhacay shil ay aad u qaad qaadday saxaafaddu kaddib markii Milan laga diiday gool rasmi ahaa oo uu dhaliyay Suley Ali Muntari oo xalay garoonka joogey, goolkaasoo hal mitir ku dhowaad galay shabaqa Juve, balse uu Buffon soo bixiyay.
Waxaa markan gool muran dhaliyay laga diidey kooxda Juve oo uu gool laad xor ah u ansixiyay Miralem Pjanic, kaasoo ahaa mid lagu murmi karo maaddaama ay dadka qaar ku doodayaan inuu kubadda hawaystey Binatia oo hobseed ku jirey, waloow aanu midkoodna kubadda taabanin isaga iyo Bonucci.
Haddaba, dadka ayaa baraha bulshada isla dhexmaraya sawirro maad leh oo ay kulankaa ka sameeyeen ee hoos ka daawo.
AS ROMA VS USC PALERMO: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan!